जथाभावी पिल्स : बढ्यो जोखिम |
प्रकाशित मिति :2015-06-16 12:57:45
‘छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने डरले सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका धेरै महिला अहिले परिवार नियोजनको अस्थाई साधान पिल्सलाई महिनावारी रोक्ने औषधीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
बाजुराको जयबागेश्वरीकी गोला कुमालले महिनावारी रोक्न ३ वर्षसम्म पिल्स चक्की प्रयोग गरिन् । गोठमा बस्न समस्या र महिनावारी भएको बेला गाई, भैँसी दुहुन नपाईने भएकाले उनले पिल्स चक्कि खाएको वताईन् । कमजोर महसुस हुने, रिङ्गटा लाग्ने समस्या आएपछि उपचारका लागि उनी भारत गईन् । डाक्टरले पिल्सका कारण उनलाई रक्तअल्पतालगायत अन्य समस्या आएको बताएपछि अहिले पिल्स खान रोकेकी छन् । ३ वर्षसम्म पिल्स खाँदा देखिएको समस्याको उपचारमा २ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाई छ ।
सोही गाँउकी भाना थापाले पनि महिनावारी रोक्न लामो समयदेखि पिल्स चक्कि खाँदै आएकी छन् । महिनावारी भएको बेला देबी, देवताको पुजा, बिवाह ब्रतबन्ध, शुभकार्य नहुने र गाई, भैँसी दहुुन नपाउने भएकाले आफूले औषधि खाने गरेको उनले वताईन् । उनका अनुसार गाँउका अधिकांश महिलाले महिनावारी रोक्न पिल्सको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
परिवार नियोजनको अस्थाई साधान पिल्सको एउटा पत्तामा २८ वटा चक्कि हुन्छन् । जसमा २१ वटा हर्मोन चक्कि र ७ वटा आइरन चक्कि हुन्छन् । महिनावारी रोक्न २१ वटा हर्मोन चक्कि दैनिक एक एक वटा खाएमा महिनावारी नहुने भएकाले यहाँका महिलाले यो औषधि खाने गरेका छन् । आइरन चक्कि खाएमा महिनावारी नियमित हुने भएकाले आइरन चक्कि नखाएर २१ वटा हर्मोन चक्किमात्रै खाने गरेको अछामको ठाँटी गाविसकी कल्पना नेपालीले वताईन् । नेपालीले अछाममा पनि धेरै महिलाले महिनावारी रोक्न औषधि खाने गरेको वताईन् । स्थानीय महिलाले यो चक्किलाई छाउ रोक्ने औषधिका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । औषधी पसलमा किन्न जाँदा पनि छाउ रोक्ने औषधि भनेर माग्ने गरेको पसलेहरूले वताउँछन् ।
सुदुरपश्चिमका महिलाले परिवार नियोजनको अस्थाई साधन पिल्स, सुनौलो गुलाफ, निलोकन चक्कि जस्ता औषधि महिनावारी रोक्न प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । छाउपडी प्रथाले जरो गाडेको यो क्षेत्रमा महिनावारी केही समयका लागि रोक्न महिलाले पिल्स चक्कि प्रयोग गर्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ अहेब दिपक शाह वताउँछन् ।
सुदुरपश्चिमका बाजुरा, अछाम बझाङ्ग, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुराका महिलाले परिवार नियोजनको अस्थाइ साधन महिनावारी रोक्न प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । दैनिक एक चक्कि पिल्स खाएमा एकदिन महिनावारी पर सर्छ । एक महिनासम्म महिनावारी सार्नका लागि दैनिक एउटा चक्कि खाने गरेको भेटिएको छ । यो चक्कि महिनावारी रोक्न अविवाहित महिलाले समेत खाने गरेका छन् ।
शाह भन्छन्, ‘छाउपडी गोठमा बस्दा उनीहरूमाथि बलात्कार हुने, जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने, सर्पले टोक्ने जस्ता समस्याले यहाँ अधिकांश महिलाले पछिल्लो समयमा परिवार नियोजनको अस्थाई साधन पिल्सलाई महिनावारी रोक्न प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’
चाडपर्वमा महिनावारी हुन्छ कि भन्ने डरले अविवाहित महिलाले पनि यो चक्की खाने गरेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अबस्थीले वताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा पिल्सको निकै दुरुपयोग भईरहेको छ । लामो समयसम्म प्रयोगले महिलामा रक्तअल्पता, मानसिक तनाव जस्ता समस्या देखिन्छ ।’
सुदुरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा छाउपडी प्रथाका कारण परिवार नियोजन अस्थाई साधन पिल्स चक्कि महिनावारी रोक्नमा प्रयोग भईरहेको सेती अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. गणेशबहादुर सिंह वताउँछन् । यतातिर महिनावारी भएमा पुजाआजा जस्ता सांस्कृतिक काममा सहभागी हुन नपाइने भएकाले यस्तो औषधी प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,—‘सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार गर्न आएका महिलाले महिनावारी रोक्न पिल्स खाने गरेको वताउने गरेका छन । यसको लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा बाँझोपन हुने, बच्चा खेर जाने जस्ता समस्या हुन सक्छ ।’ कैलाली र कञ्चनपुरका महिलाले शुभकार्य, धार्मिक कार्यमा महिनावारी भएमा सहभागी हुन पाउँदैन भनेर यस्तो औषधि केहीदिनका लागि प्रयोग गर्ने भएपनि पहाडी जिल्लाका महिलाले भने महिनौंसम्म खाने गरेको डा सिंहको भनाइ छ ।
महिनावारी भएमा बिहे ब्रतबन्ध, पुजाआजमा सहभागी हुन नपाउने, गाईभैँसी दुहुन नपाउने भएकाले पिल्स खाएर महिनावारी रोक्ने गरेको बाह्रबिस कि स्वयंसेविका रुखमणि शाह वताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘परिवार नियोजनको अस्थाई साधनका रुपमा प्रयोग हुने औषधि महिनावारी रोक्न खानुहुन्न भन्ने चेतना महिलामा नभएको पाईयो ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चेतनाका नाममा धेरै रकम खर्च भएपनि यस बारेमा कसैले चासो नदेखाएको नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर शाही वताउँछन् । मुख्यगरी छाउपडी गोठमा बस्दाको समस्यालाई टार्न पिल्सको प्रयोग मार्फत महिनावारी रोक्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
सुदुरपश्चिमका महिला महिनावारी भएको बेला पाँचदेखि सात दिनसम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नुपर्छ । उनीहरूले सार्वजनिक पानी पधँेरा प्रयोग गर्न पाउँदैनन भने दुधदही खान समेत बन्देज छ । महिनावारी भएका महिलालाई बारीमा लगाएको फलफुल, तरकारी समेत छुन दिइदैँन ।
विवाहित महिलाले महिनावारी ५ दिने बारे पुग्छ तर, अविवाहितले भने ७ दिनसम्म बार्नुपर्ने हुन्छ ।
महिलाले पिल्स चक्की स्वास्थ्य चौकीबाट परिवार नियोजनका लागि भन्दै लिने तर, महिनावारी रोक्नका लागि धेरै प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको अनमी शर्मिला शाह वताउँछिन् । उनीहरूले पिल्स चक्कीलाई परिवारको नियोजनको साधन भन्दा छाउ रोक्ने औषधिका रुपमा चिन्ने गरेको अछामको साँफेमा १० वर्षदेखि औषधी पसल गर्दै आएका एक व्यवसायीले वताए । ती व्यवसायीका अनुसार, दैनिक चार पाँच जना महिला यो औषधि किन्न आउँछन् ।
यो औषधिले महिनावारी अनियमित हुने, लामो समयसम्म प्रयोग गरेमा महिलामा बाँझोपन आउने, डिपे्रसन हुने अनमी शर्मिला शाह बताउँछिन् । ‘अविवाहितले समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई पछि बच्चा जन्माउँन समस्या हुनसक्छ’ उनले भनिन् । यसरी औषधि दुरुपयोग भएपनि यसलाई रोक्न कसैले चासो देखाएको पाइएकोे छैन ।
प्रकाश सिंह दि हिमालयन टाईम्स बाजुरा सम्वाददाता हुन्।
प्रकाशित मिति : २०७२ असार १ गते मंगलवार